प्रसारणकर्मीलाई ‘भ्वाइस’ विशेषज्ञको सुझाव : कसरी बन्ने असल प्रस्तोता
Wednesday, 16 May, 2018 8:56 AM
प्रसारणको दौरान आफ्नो आवाजको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने जान्न जरुरी छ । केवल राम्रो आवाजले मात्र प्रस्तुति पनि राम्रो हुन सक्दैन । प्रस्तुतिको क्रममा तपाईं शान्त र स्वभाविक सुनिनु जरुरी छ । यसको लागि माइक्रोफोनको प्रयोगजस्ता कुरालाई पनि ध्यान दिनु पर्दछ । यसबारेमा बीबीसीको भ्वाइस विशेषज्ञहरुले दिएको व्यवहारिक सल्लाह यस्तो छ ।
माइक्रोफोनको प्रयोग :
बीबीसीका भ्वाइस विशेषज्ञ एल्सपेथ मारिसन भन्छन्,‘माइकलाई आफ्नो मुखको निकै नजिक राख्नबाट बच्नुहोस । गायकहरुले नजिक राखेको देख्नुभएको होला तर, गाउनु र बोल्नु अलग–अलग कुरा हो । यसको सट्टामा आफ्नो माइक्रोफोनलाई एक व्यक्तिको कान सम्झनुहोस र सोहीअनुसार दुरीको पालना गर्नुहोस । ’
भोल्यूम,यानी आवाज तलमाथि हुने कुरालाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ । तपार्ईले कुनै भिडलाई सम्बोधन गरिराख्नु भएको छैन । यसकारण गर्जन आवश्यक छैन । यसको अर्थ यो पनि नसोच्नुहोस, की तपार्ई कुनै विज्ञापनको कलाकार पनि होइन । खासखुस गर्नु परोस ।
सास लिँदा याद राखौं
यदि तपाईले स्वभाविक रुपले स्वास लिनुहुन्न भने तनावग्रस्त सुनिनुहुन्छ । सास लिन विर्सिएमा थाकिन्छ । अनि यस्तो ठाउँमा आवाज रोकिन्छ जुन अस्वभाविक सुनिन थाल्छ ।
कुन ठाउँमा स्वास लिने यसका लागि तपाईंले आफ्नो स्कृप्टमा चिन्ह् लगाउन सक्नुहुन्छ । गहिरो सास लिनको लागि पूर्णविराम राख्न सक्नुहुन्छ । र, जहाँ हल्का स्वास लिने हो त्यहाँ ‘कमा’ लगाउन सकिन्छ । ताकि पुरै वाक्य पढ्न सकियोस ।
आवाजको ख्याल गर्नु
आफ्नो आवाजको समुचित ख्याल राख्न जरुरी छ । प्रसारणमा जानुभन्दा अघि यसको प्रयास गर्नु झनै जरुरी छ । त्यसो हो भने सबैभन्दा राम्रो के ? पानी– यो तपाईंको आवाजको सबैभन्दा असल साथी हो । प्रसारणको दिन प्रसस्त मात्रामा पानी पिउन जरुरी छ ।
अनि खराब ?
धुमपान, कफी र केही खास प्रकारका खाद्यपदार्थ र औषधीले तपाईंको आवाजलाई रुखोसुखो बनाउन सक्छ । त्यसो त अलग–अलग व्यक्तिलाई यसको फरक–फरक अनुभव हुनसक्छ । त्यसकारण, यसको लागि सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको तपाईं स्वयमले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने तपाईंलाई के कुराले ठिक गर्छ के कुराले बेठिक ।
तपाईंको शरीरले के अनुभव गरिरहेको छ । आवाज यसैमा निर्भर गर्दछ । अबेर रात या विहानै प्रसारणमा आउनेहरुले आवाज विल्कुल फ्रेस छ भन्ने पार्नु पर्दछ । यद्यपि तपाईले त्यस्तो अनुभव नगरिरहेको भए पनि आवाजमा त्यसको प्रतिविम्ब आउन दिनु हुँदैन । यसका लागि एल्सपेथ भन्छन्–‘ तपाई कसरी बस्नु भएको छ यसको ध्यान राख्नुहोस । यदि सिधा बस्नु भएको छैन भने पनि यसले आवाजमा असर पार्न सक्छ । केही व्यक्तिहरुमा उभ्भिएर बोल्दा सजिलो मान्छन् । यदि तपाईं सामान्य जीवनमा कुनै खास भाव–भंगिमा बोल्नुहुन्छ भने प्रसारणको क्रममा पनि त्यस्तै गर्न सक्नु हुन्छ । अन्यथा तपाईं स्वभाविक सुनिनुहुने छैन ।